トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Horukon sy ny vondrona fanahafana
Ao Horukon fisamborana, dia voalaza fa nizara ny jackpot amin'ny alalan'ny famaritana sokajin ny pachinko milina ao amin'ny mpanova. Noho izany, izany no ilazana fa mahomby amin'ny Horukon fisamborana, te-hahita izay karazana zavatry ny fifandraisana misy eo amin'ny Horukon sy ny vondrona. Pachinko milina no mifandray amin'ny alalan'ny mpanova mba hahazoana ny fahefana famatsiana.
isa izay mifandray amin'ny mpanova, antsoina hoe ho tafasaraka efatra ho vondrona dimy ny. Sa efa lasa vondrona isan'ny amin'ny farany, na efa lasa amin'ny vondrona ilany-by-lafiny ao amin'ny serial isa, dia toa ho ny zava-misy fa samy efa natsangana.
Voalohany indrindra, raha tonga ny fotoana tianao ho vonoina hira be, araka ny lal?na iray, Horukon dia, Tiako ny manatanteraka ny jackpot fitsarana. Tonga ny tapa-kevitra jackpot manjo intsony ny fotoana, Horukon dia amin'ny vondrona fototra, mba hitaona ny vondrona mba hiteraka lehibe hira.
Ao amin'ny vondrona izay nandresy, ny jackpot manomboka hitranga, ao anatin'ny vondrona izay jackpot nomena, dia ny hoe vanim-potoana sasany jackpot mivoaka. Ankoatra izany, ao amin'ny Horukon, mba hahatonga ny baolina avy tao an-efi-trano eo amin'ny pachinko manontolo eo ho eo, ny ambaratonga ny fisehoan-javatra ny fotoana sy ny lehibe mba hiteraka hira hira be, voalaza mifehy.
ho amin'izany, na ho avy dia fitongilanana eo amin'ny vondrona izay jackpot no mety hitranga, mba mialoha ny vondrona fa lehibe ny hira manaraka no hitranga, satria ny Neraiuchi no Horukon voasambotra.
ihany koa ny mampiasa ny rafitra fanamarinana ny tavany, raha mifidy ny olona namoaka ny jackpot, anjakan'ny fanombantombanana koa fa ny fanaovana loteria vondrona.